FIFIDIANANA LOHOLONA : Manaja izay voalazan’ny lalàna ny Fanjakana – Free News
Loholona vaovao no tokony hiasa manomboka ny 02 Febroary 2021.
Accueil/Politika/FIFIDIANANA LOHOLONA : Manaja izay voalazan’ny lalàna ny Fanjakana
FIFIDIANANA LOHOLONA : Manaja izay voalazan’ny lalàna ny Fanjakana
Lucien R. 16 septembre 2020
Nitondra fanehoan-kevitra mahakasika ireo tsikera samihafa manodidina ny firosoana amin’ny fifidianana Loholona ny Mpitondra tenin’ny Governemanta, omaly. Nambarany fa niroso tamin’ny fanatanterahana ny fifidianana Loholona ny Fitondrana satria izay no voalazan’ny lalàna. Tsy nisy fandikàn-dalàna na jadona nataon’ny Fitondrana mihitsy. Misy mantsy olona milaza fa amboletra no ataon’ny Fitondrana ankehitriny. Tsara ho fantatra fa tapitra amin’ny 02 Febroary 2021 ny fe-potoam-piasan’ny Loholona ankehitriny. Araka izany, tsy maintsy hatomboka dieny izao ny dingam-pifidianana rehetra fa tsy miandry ny fahataperan’ny fe-potoam-piasan’ireo am-perinasa ankehitriny. Izany hoe, tokony ho ireo Loholona vaovao avy hatrany no handray ny fahefana amin’ny 02 Febroary 2021.
Tsy nandrenesam-peo ny KMF/CNOE tamin’ny 2015
Araka ny fantatra, nitory tany amin’ny Filankevi-panjakana ny Fiarahamonim-pirenena mpanara-maso ny fifidianana KMF/CNOE, izay milaza fa tsy manara-dalàna ny Fanjakana amin’ny fanatanterahana ny fifidianana Loholona. Notsiandrin’ity fiarahamonim-pirenena ity manokana fa tsy ara-dalàna ny nametrahana ny datin’ny 11 Desambra, hanatanterahana ny fifidianana. Notsiahivin’ny minisitra Lalatiana Andriatongarivo fa ny 29 Novambra no natao ny fifidianana Loholon’I Madagasikara ny taona 2015. Tsy nandrenesam-peo anefa ny KMF/CNOE tamin’izany fotoana izany. Misy koa ireo nilaza fa hoe mbola tsy feno ireo mpifidy vaventy satria mbola tsy natao ny fifidianana eny anivon’ny Faritra, sy ny solontenam-paritany. Ny tsara ho marihana anefa dia mbola tsy natao ihany koa izany tamin’ny taona 2015 kanefa nirosoana hatrany ny fifidianana Loholona. Ny KMF/CNOE ihany koa tsy nandrenesam-peo mahakasika izany, tamin’izany fotoana izany. Ny Filohan’ny Antenimierandoholona ankehitriny koa, izay mitondra fanakiana mikasika ny fanatanterahana ny fifidianana amin’ny 11 Desambra, dia niasa sy nolaniana tao anatina fepetra tahaka izao hirosoana amin’ny fifidianana izao. Tsy mitombina, noho izany, ny fanehoankevitra entina hanenjehana ny Fitondrana ankehitriny ho tsy manara-dalàna.
Mbola manana hatramin’ny 11 Novambra
Etsy ankilany, adihevitra mipetraka koa ankehitriny ny filazana fa mbola tsy feno ny “Collège électoral”, isan’izany ny Ben’ny tanàna satria mbola misy amin’izy ireny no manao « fangatahana” eny anivon’ny “Conseil d’Etat” amin’izao fotoana izao. Tsara marihana anefa fa iray volana mialohan’ny fifidianana vao mikatona ny lisi-pifidianana, araka ny didim-panjakana izay noraisin’ny Filankevitry ny Governemanta farany teo, izany hoe, ny 11 Novambra. Mbola manana fotoana, noho izany, ireo manana fanamarihana tamin’ny fifidianana kaominaly farany teo, hanaovana fanamarihana eny amin’ny Filankevi-panjakana, hatramin’ny datin’ny 11 Novambra. Antenaina fa hilamina izany, iray volana mialohan’ny fifidianana, hoy ny fanazavana. Ny tsara ho fantatra koa anefa dia efa miditra amin’ny fikirakirana ireo antontan-taratasy tonga ao aminy ny Filankevi-panjakana amin’izao fotoana izao. Nitsotra ny minisitra Andriatongarivo Lalatiana fa vonona hatrany ny Fitondrana amin’ny adihevitra demokratika sy mety hitondra fampandrosoana.
ROCADE D’IARIVO – 10 TAONA ATY AORIANA: « Isika no nanomboka, isika koa no namarana ny tetikasa”, hoy ny Filoha
FANALAM-BARAKA SY NY FANELEZANA VAOVAO DISO: Nitory ny “La Gazette de la Grande île” ny Minisitra Lalatiana Andriatongarivo mivady
FIRENENA BRITANIKA : Hanamafy ny fiarahamiasa amin’i Madagasikara